ari dhizeti Ndidzo ndiro dzinotapira kana dzinorwadza idzo dzinowanzo kudyiwa mushure mekudya kukuru, angave ari mafuta, makeke, makeke, ice cream, machokoreti, nezvimwe. Kazhinji vane mupiro wakakura uye une simba, asi kuBezzia tichagadzirirawo avo vane hutano.
Kana madhiri akaonekwa nechimwe chinhu, imhaka yekusaguma kwavo uko kune uye nemhando dzakasiyana dzavanogona kutora. Izvi zvinodaro nekuti kune madhiri mune ese tembiricha uye magadzirirwo (panguva imwechete, kupisa, kutonhora, chando uye kusanganiswa).
Kudya uku kunowanzo fadza vanhu, saka hatizeze kukukoka iwe kuchikamu chakatsaurirwa dhizeti mapeji.
Whole wheat pumpkin sponge cake nemazambiringa akaomeswa
kubudikidza Maria vazquez inoita 1 zuva .
Iyo yese yegorosi pumpkin keke ine mazambiringa akaomeswa andinoti nhasi akanakira kudya kwemangwanani, snack kana, wadii, ...
Brownie cheesecake ine dulce de leche nesinamoni
Nhasi tinokukoka iwe kuti ugadzire chinotapira chisingadzivisike paBezzia. A brownie cheesecake ine dulce de leche nesinamoni kana ...
Unoyeuka here magirazi echizi chizi, compote nesinamoni yatakaronga svondo rapfuura? Iyo compote ...
Magirazi eakarohwa chizi nyowani, compote nesinamoni
Iwe unofarira maapuro dhizeti here? Imwe yezvatinoda ndeye, pasina mubvunzo, iyo puff pastry pie ine compote neapuro ...
Kuwa inguva huru yekubheka makuki. KuBezzia hatimbove nungo dzekubatidza hovhoni, asi ...
Ndiani asinganzwe kuda kuyedza aya chokoreti akazadzwa maamondi makuki? Usatakurwa neyake ...
Puff pastry keke ine compote uye apuro
Kana ndeipi yakafanana apie pie ine mamwe maapuro. Ndinovimba unofarira mapai ...
Ndiani asingade kuperekedza kofi masikati ano nevamwe pasiegos sobaos senge vatinokudzidzisa ...
Almond Cookies ane Rima Chokoreti Chips
Ndiani asingade chokoreti chip nuggets? Vazhinji vedu tinowanzovatyaira. Ivo vakanaka…
Apple keke nema walnuts uye mazambiringa akaomeswa
Ungada here kutanga vhiki uchiravira hombe chipanje keke? Tine nzira yakakwana yako: Apple keke nema walnuts ...
Pumpkin pie uye mukaka wakakomberedzwa
Iwe unofarira manhanga? Kana zvirizvo, haugone kumira kuyedza iyi manhanga pie uye mukaka wakanyorovera uyo ...